प्रार्थना प्रेरक भक्तिमय प्रसारण # 320 स्वागत
रूपमा सधैं, यो प्रार्थना गर्न प्रोत्साहन गर्न आज तपाईं संग हुन त राम्रो छ।
आज, म तिमोथी जोन बैरेट द्वारा तपाईं संग titled एक कविता बाँडेर "यो म प्रार्थना" सुरु गर्न चाहन्छु।
पवित्र आत्मा, मलाई माध्यम बोल्न,
त्यसैले सबै नष्ट प्राण सीधै, देख्न सक्छौं
छैन मेरो इच्छा, तर परमेश्वरको म खोज्न।
तपाईंको वचन दिएको, बलिया हुन्छन्
मेरो कमजोर कहाँ।
पवित्र आत्मा, मलाई प्रेम सिकाउन,
यति घृणा ती माथि चढ्नु सक्छन्।
म यो महत्वपूर्ण छ, कि प्रेम थाह,
त्यसैले यो मलाई माध्यम, शो प्रेम प्रार्थना।
पवित्र आत्मा, मलाई दिन मदत,
त्यसैले तपाईं माध्यम बिना ती, बाँच्न सक्छ।
आवश्यकता हो गर्नेहरूलाई दिन,
मेरो माल साझेदारी, तर लोभ मा गर्न।
पवित्र आत्मा, मलाई बुद्धिमानी बनाउनु,
मलाई ज्ञान खुवाउन, मेरो हृदय यो रुन्छिन्।
मलाई थाहा छैन कुन बुझ्न,
मलाई बुद्धिमानी बनाउनु, त्यसैले म बढ्न सक्छ गर्नुहोस्।
पवित्र आत्मा, मलाई विश्वास मदत
म पर्छ समयमा, तपाईँले भर पर्नुको गर्न।
मेरो विश्वास म प्रत्येक समय बढ्नेछ।
मेरो भरोसा, तपाईंलाई मेरो भरोसा निर्माण गर्नुहोस्।
पवित्र आत्मा, मेरो गर्व,
मलाई नम्र र मेरो पुस्तिका हुन।
पहिलो गर्व र त्यसपछि गिरावट आउँछ।
मलाई तपाईं गर्व, वा कुनै पनि सबै गरौं।
पवित्र आत्मा, मलाई साहसी बनाउन,
समाचार फैलाउन, धर्मशास्त्र पकड।
चर्को बाहिर बोल्न, सुन्न भनेर ती,
हाम्रो परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, तिनीहरूले डर हुँदैन।
पवित्र आत्मा, म प्रार्थना यो,
यो धेरै दिन सम्म मलाई भर्न।
तपाईं बलियो हुन संग, शक्ति छ,
तिनीहरूले गलत हो जहाँ, कुराहरू सही बनाउन।
पवित्र आत्मा, मलाई चमक गरौं,
येशू ख्रीष्ट संग, मेरो यो जीवन,
अन्य प्राण चाँडै, बाहिर पाउनुहुनेछ
के परमेश्वरको सेवा सबै बारे छ।
यो प्रसारण को सरल उद्देश्य, उत्प्रेरित प्रोत्साहन, र तपाईं बस प्रार्थना गर्न exhort छ। यो रेडियो प्रसारण पहिले प्रार्थनाको गोप्य र शक्ति थाहा र जो वास्तवमा नियमित रूपमा साँचो प्रार्थना अभ्यास, बरु यो कठिन प्रार्थना गर्न पाउन सक्छ गर्नेहरूका लागि छ जो मानिसहरू लागि वा समय छैन दाबी गर्ने मान्छे को लागि जरूरी छैन प्रार्थना गर्न। म भन्दा मसीही मानिसहरूलाई प्रार्थना गर्न कसरी सिक्न आवश्यक छैन भनेर विश्वस्त छु; तिनीहरूले बस प्रार्थना गर्न आवश्यक! म तपाईं बस प्रार्थना गर्न प्राप्त गर्न सक्छन् भने, अद्भुत कुराहरू सबै प्रकारका तपाईं, तपाईंको परिवारको लागि के गर्न सुरु हुनेछ, र जे परमेश्वरको गर्न तपाईं भनिन्छ छ। हामी हाम्रो आत्मपुरक भावना आधारित प्रार्थना छैन, हामी परमेश्वरको वचन उद्देश्य तथ्य आधारित प्रार्थना।
यस्तो लेखिएको छ जो 2-3: परमेश्वरले आज वचन देखि हाम्रो प्रार्थना प्रेरक पद योना4छ "अनि उहाँले प्रभुको निम्ति प्रार्थना गरे र भने, म तिमीलाई, हे प्रभु, म अहिलेसम्म हुँदा यो मेरो भन्दै, थिएन प्रार्थना मेरो ? देश यसकारण म Tarshish निम्ति अघि भागे:। म तिमी एक दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर थाह लागि, र रिस गर्न ढिलो, दयालु, र ठूलो दया को, र दुष्ट को तिमीलाई repentest त्यसैले अब, हे प्रभु, ले, म, तिमीलाई बिन्ती मलाई मेरो जीवन;। यो मलाई बाँच्न भन्दा मर्न लागि राम्रो छ लागि "
मलाई तपाईं संग मत्ती हेनरी गरेको Commentary देखि यो पद सन्दर्भमा केही मुख्य बुँदा साझेदारी गर्न अनुमति:
पद3मा, योना आफ्नो उपयोगिता को बीचमा अब हुनुको, र त्यसैले बाँच्न फिट। उहाँले जसको सेवाको परमेश्वरको सुन्दर स्वामित्व र फलिफाप थियो। निनवेको रूपान्तरण उहाँलाई अश्शूरले सम्पूर्ण राज्य रूपान्तरण गर्न सहायक हुनुको आशाहरू दिन सक्छ; तिनलाई त राम्रो उद्देश्य गर्न बस्दा एक आशा थियो जब उहाँले मर्न सक्छ इच्छा र यति बिरामी बचाउनुभयो हुन सक्छ लागि यो त्यसैले धेरै निरर्थक थियो। योना यति स्वभाव बाहिर र मर्न त्यसैले अनुपयुक्त अब हुनुको। तिनले कसरी मर्ने, र उहाँले वास्तवमा उसलाई quarreling थियो, परमेश्वरको न्याय-सीट अघि देखा जा विचार durst? यस मा संसारबाट जान एक मानिस लागि उचित आत्माको एक फ्रेम थियो? तर सरोष मृत्यु इच्छा गर्नेहरूलाई सामान्यतः धेरै unprepared यसको लागि रूपमा, यो के गर्न कम्तिमा कारण छ। हाम्रो व्यापार हाम्रो जीवन कहिले र कसरी त्यो प्रसन्न तुल्याउने छिन्न परमेश्वरको आफैलाई उल्लेख गर्न त जीवनको काम गरेर मर्न तयार, र प्राप्त गर्न छ।
तपाईं मेरो व्यक्तिगत प्रोत्साहन आज तपाईं आफ्नो पति देखि या अन्य मान्छे देखि साँचो आनन्द प्राप्त छैन छौँ, तर तपाईंले प्रभु पालन देखि यो प्राप्त हुनेछ, र प्रार्थना परमेश्वरको आज्ञा पालन तपाईं सही हुन मदत गर्नेछ र यसैले नित्य आनन्द छ कि छ आफ्नो जीवनमा।
हाम्रो प्रार्थना प्रेरक उद्धरण आज एक एसी Dixon छ। उहाँले भन्नुभयो: "हामी संगठन निर्भर गर्दा हामी संगठन के गर्न सक्नुहुन्छ प्राप्त; हामी शिक्षा निर्भर गर्दा हामी कस्तो शिक्षा गर्न सक्छन् प्राप्त; हामी मानिस निर्भर गर्दा, हामी के गर्न सक्नुहुन्छ मानिस प्राप्त; हामी प्रार्थना निर्भर तर जब, हामी परमेश्वरको के गर्न सक्नुहुन्छ प्राप्त। "
हाम्रो प्रार्थना प्रेरक भक्तिमय आज डा यूहन्ना आर चावल देखि "गरेर प्रार्थना" titled हाम्रो श्रृंखला को भाग 25 छ।
1-8: येशूले लूका 18 मा importunate प्रार्थना गर्न सिकाउनुभयो मानिसहरू सधैं प्रार्थना गर्नुपर्छ, र बेहोश छैन भनेर, "अनि उहाँले यो अन्त गर्न तिनीहरूलाई एक दृष्टान्त spake; शहर मा यसो थियो परमेश्वरले छैन feared जो एक न्यायाधीश, , न मानिस regarded: अनि शहर मा विधवाको थियो; र त्यो मेरो शत्रु मलाई बदला, तिनलाई यसो भन्दै निम्ति आए अनि उहाँले एक जबकि लागि छैन:। तर त्यसपछि उहाँले म परमेश्वरको छैन डर तापनि, आफूलाई भित्र भने न त सन्दर्भमा मानिस; यस विधवाले मलाई troubleth किनभने यद्यपि, म त्यो मलाई थकित आउँदै उनको नित्य द्वारा lest, उनको बदला हुनेछ अनि प्रभु के अन्यय न्यायाधीश भन्नुभयो सुन, भन्नुभयो अनि परमेश्वरले दिन र रात रुन जो आफ्नै चुन्नु, बदला हुनेछ।। उहाँले तिनीहरूलाई लामो सहन हुनत उसलाई निम्ति,? म त्यो। चाँड़ैनै तिनीहरूलाई बदला हुनेछ भनेर मानिस cometh पुत्र, उहाँले पृथ्वीमा विश्वास पाउन पर्छ तैपनि जब तपाईं बताउन? "
दृष्टान्तमा एकमात्र अन्त माध्यम प्रार्थना छ कि नोट। येशूले "मानिसहरू सधैं प्रार्थना गर्नुपर्छ, र बेहोश छैन भनेर, यो अन्त गर्न।" यो उखान कुरा
पनि एक गरिब विधवाले उनको कारण सुन्न र उनको विरोधीहरू देखि उनको उद्धार र उनको न्याय दिन एक न्यायाधीश निवेदन गर्न सक्छन्। अनि परमेश्वरको आफ्नै छोराछोरी उहाँलाई दिन र रात निम्ति रुन हुनेछैन? "उहाँले तिनीहरूलाई लामो सहन हुनत अनि परमेश्वरले उहाँलाई निम्ति दिन र रात रुन जो आफ्नै चुन्नु, बदला हुनेछ?"
पद 8 माथिको मुक्तिदाता आउँदा उहाँले पृथ्वीमा थोरै विश्वास पाउनुहुनेछ कि सङ्केत। मानिसहरू प्रार्थनामा विश्वास छैन। मान्छे माध्यम प्रार्थना छैन। मानिसहरू चुकौता मा, स्वीकार मा, उपवास मा, लामो घण्टामा, हृदय-खोज मा मूल्य तिर्न छैन। परमेश्वरको मान्छे साँच्चै माध्यम प्रार्थना गर्दा तर, त्यसपछि तिनीहरूले परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई लागि छ पवित्र आत्मा र केहि को anointing, पुनरुद्धार, सुरक्षा, प्रबन्ध गर्न सक्नुहुन्छ। माध्यम प्रार्थना!
यो unconverted पापी मुक्तिको स्वीकार तुरुन्त ख्रीष्टमा भरोसा र गर्न बस आवश्यक छ। प्राण जीत र revivals छ imperative छ जो कि, तर पहिले परमेश्वरको एक बच्चा छ जो एक परमेश्वरको दरवाजे मा शिविरमा एक सही छ र लगातार, insistently परमेश्वरको प्रतिज्ञा निवेदन र आवश्यक छ, जो कि सम्म, एक इन्कार लिन इन्कार परमेश्वरको प्राप्त छ।
ओह, परमेश्वरको मानिसहरूलाई --- प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना गर्न प्रोत्साहित हुन सक्छ तिनीहरूले गरेर प्रार्थना गर्न प्रोत्साहित हुन सक्छ!
तपाईं यो माध्यम प्रार्थना सम्म प्रार्थना गरिरहन
परमेश्वरको ठूलो प्रतिज्ञा सधैं साँचो हो
तपाईं यो माध्यम प्रार्थना सम्म प्रार्थना गरिरहन।
अब, मित्र यो हामीलाई प्रार्थना गर्न लागि समय छ ...
तपाईं यस प्रसारण अन्तमा आफ्नो प्रार्थनाको अनुरोध मा पठाउन को लागि उद्घोषक जानकारी प्रदान गर्नेछ, सम्झना।
अब, मित्र, प्रार्थनामा मलाई सामेल कृपया हामी बस सम्झाए छन् रूपमा ........ पवित्र पिता परमेश्वर, हामी केहि र सबै बारे माध्यम प्रार्थना गर्न सक्छौं र तपाईं सुन्न र हामीलाई जवाफ हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहोस् कि धन्यवाद । हामी तपाईं आशीर्वाद र साँच्चै मान्छे मदत गरिरहेका तपाईं लागि खडा र जसले संसारभरि सबै पास्टर, चर्च नेताहरूले, र मिसनरीहरू डोऱ्याउन भनेर पनि प्रार्थना। हामी पनि प्रार्थना:
>3लाख मानिसहरू मुक्तिदाताको रूपमा तपाईं चिन्न
> चर्च को पुनरुद्धार
> यो राष्ट्रको निको
प्रभु, हामी तपाईंलाई बचाउन र अध्यक्ष र यस देश चलाउन सबैलाई सरकारी अधिकारीहरु, साथै सबै अन्य देशहरूमा नेतृत्व र बुद्धि दिन भनेर पनि प्रार्थना। अब, प्रभु, हामी प्रार्थना अनुरोध पठाईएको छ जो तीन मानिसहरूलाई लागि प्रार्थना:
तपाईंको इच्छा अनुसार मा-व्यवस्था-बुबा उनको निको र यस समयमा आफ्ना परिवार र साथीहरू प्रोत्साहन
उहाँले तपाईं के गर्न उहाँलाई भनिन्छ गरेका काम गर्न सक्छन् भनेर आफ्नो आलस्य हटाउन उसलाई मदत
उहाँलाई र जब आफ्नो मित्र आशिष
पवित्र बुबा परमेश्वर, हामी आफ्नो हृदय मा तपाईं स्वीकार गरेका छन्, जसले निम्न मानिसहरूलाई लागि प्रार्थना। हामी तपाईं विश्वासमा तिनीहरूलाई पुष्टि र तिनीहरूलाई तपाईं तिनीहरूलाई हुन चाहनुहुन्छ कि आत्मा-भरिएको मसीहीहरूले बन्न विश्वासमा बढ्न छ भनेर, प्रभु प्रार्थना। हामी विशेष लागि प्रार्थना ----
मेक्सिको मा अनिता
युमा, एरिजोना मा माइकल
अब प्रभु हामी एक जबकि लागि सुरक्षित गरिएको छ तर जो तपाईंले आफ्नो जीवनमा recommitted छन् जो निम्न मानिसहरूलाई लागि प्रार्थना। हामी यो निर्णय तिनीहरूलाई संग रमाउने र तिनीहरूले तपाईं आफ्नो प्रतिबद्धता हुनेछौं र विश्वासमा बलियो हुन कि प्रार्थना। हामी विशेष लागि प्रार्थना ----
Calumet पार्क, इलिनोइस मा एन्ड्रयू
क्यानाडा मा Carrol
शिकागो, इलिनोइस मा Shanda
तपाईं आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा प्रभु येशू ख्रीष्टको थाहा छैन भने प्रिय मित्र, तपाईंको पहिलो प्रार्थना हामी पापी गरेको प्रार्थना कल के हुन आवश्यक छ। यूहन्ना 3:16 "परमेश्वरले उहाँले आफ्नो एक मात्र उहाँलाई नष्ट, तर अनन्त जीवन हुँदैन मा जसले विश्वास छ कि, पुत्र प्यारो दिनुभएको, संसारको प्रेम लागि।" भन्छन् तपाईं मुक्तिको लागि प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्न इच्छुक छन् भने, मलाई यो सरल प्रार्थना प्रार्थना गर्नुहोस्: स्वर्गीय पिता, म एक पापी हुँ भनी महसुस र म मेरो जीवनमा केही खराब काम गरेका छन् कि। येशू ख्रीष्ट खातिर, मेरो पाप मलाई क्षमा गर्नुहोस्। म अब येशू ख्रीष्ट, मेरो लागि मर्नुभयो गाडे, र फेरि उठ्नुभयो भनी मेरो हृदय सबै संग विश्वास। प्रभु येशू, मेरो हृदय आउन र मेरो प्राण बचाउन र मेरो जीवन आज परिवर्तन गर्नुहोस्। Amen।
जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गरिरहेको बधाई र आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको स्वीकार छ! अधिक जानकारी तपाईं ख्रीष्टमा आफ्नो आफूले पाएको नयाँ विश्वास बढ्न मदत गर्न लागि, GospelLightSociety.com जानुहोस् र "तपाईं ढोका माध्यम दर्ज पछि के गर्न" पढ्ने।
अर्को समय सम्म, सम्झना, मित्र, प्रार्थना, विचार, के! परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष् दिनुहुन्छ!